Saamaynta Delta Airlines waxay ku kacaysaa amar cusub oo ah tallaalka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Saamaynta Delta Airlines waxay ku kacaysaa amar cusub oo ah tallaalka COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Bishii Ogosto, wada hadal aad u yaab leh oo ka dhex dhacay dadka saamaynta ku leh agagaarka Delta Air Lines ayaa la ogaaday markii shirkaddu ku dhawaaqday inay ku soo rogi doonto $ 200 oo dheeraad ah bishii shaqaalaha aan laga tallaalin COVID-19.
Shirkadaha Mareykanka waxay la imanayaan qorshayaasha tallaalka COVID-29.
Delta Air Lines ayaa ku soo rogi doonta $ 200 lacag dheeraad ah bishii shaqaalaha aan la tallaalin.
Qorshaha Delta Air Lines wuxuu horseeday in 150% ay kor u kacaan wada sheekaysiga saameeyayaasha.
Dhowr shirkadood ayaa la yimid qorshayaal waajibka tallaalka ka dib markii Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) oggolaadeen tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 bishii Ogosto 2021. Delta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) ayaa sidoo kale qaaday tallaabooyin adag si loo dhiirrigeliyo shaqaalaha kordhinta lacagta caymiska daryeelka caafimaadka ee shaqaalaha aan la tallaalin ee ku jira qorshahooda daryeel caafimaad oo la kulma kororka la filayo ee baahida safarka. Tani waxay horseeday in 150% kor u kac ku yimaaddo wada sheekaysiga saameeyayaasha ku xeeran 'tallaalada' shirkadda saamiyada Delta Air Lines muddadii 90-kii maalmood ee u dambeeyay (Juun-Ogosto), saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Saameeyayaashu waxay u arkeen tan inay tahay tabtii ugu dambaysay ee shaqaalaha kaashanaya inay qaataan jab COVID-19, maaddaama kiisaska caabuqa ee sii kordhaya ay mugdi geliyeen aragtida shirkadaha diyaaradaha. Dareenka saamaynta ayaa sidoo kale ku fiicnaa cabbirkan maadaama ay tahay tallaabo lagama maarmaan ah oo wax looga qabanayo khataraha maaliyadeed ee la xiriira maxaa yeelay celceliska joogitaanka isbitaalka ee COVID-19 wuxuu ku kacaa diyaaradda US $ 50,000 qofkiiba.
Bishii Ogosto, kor u kaca kale ee wada sheekeysiga saamaynta ayaa la ogaaday markii shirkadda diyaaradaha ay ku dhawaaqday inay iskaashi la leedahay hawlwadeenka tareenka xawaaraha sare leh ee Faransiis-Beljam Thalys si loo bixiyo isku xirka tareenka ee u dhexeeya Amsterdam iyo magaalooyinka Belgian ee Brussels iyo Antwerp.
Sidoo kale, waxaa jiray koror aad u xoog badan oo ku saabsan wada sheekaysiga saamaynta bishii Luulyo, markii shirkadda diyaaradaha ee fadhigeedu yahay Atlanta ay soo warisay macaashkeedii saddex-biloodlaha ahaa tan iyo bilowgii masiibada COVID-19, ka dib markii ay jabisay shantii rubuc ee khasaaraha. Kordhinta safarka firaaqada gudaha iyo dalabka safarka ganacsiga oo ay weheliso kaalmada dowladda federaalka ayaa taageertay Delta Air Lines si loo gaaro macaash saddexdii biloodle ah oo ah $ 652m Q2 2021.
Delta Air Lines waxay ku dhawaaqday qorshaheeda cajiibka ah bisha Juun si ay u shaqaaleysiiso in ka badan 1,000 duuliye xagaaga 2022, iyadoo la filayo kororka baahida safarka ka dib ka soo kabashada masiibada. Tani waxay horseeday inay kordhaan wada sheekaysiga saameeyayaasha bishii Juun.
Macluumaadka Falanqaynta Shaqada ayaa muujinaya in inta badan 2020, shirkaddu ay goobjoog ka ahayd dhajinta shaqooyinka hal-lambar ah. Si kastaba ha ahaatee, Delta Air Lines waxay aragtay kor u kaca hawlaha shaqaalaysiinta 2021. Liisaska ayaa ka kordhay 101 shaqooyin bishii Janaayo 2021 ilaa 474 shaqooyin bishii Ogosto 2021, iyadoo dhajinta shaqooyinka lagu arkay 55% kor u kac u dhexeeya Q2 2021 iyo Q3 2021.
Delta Air Lines waxay kor u qaadeysaa kireystayaasha 2021 si ay u daboolaan baahida safarka. Intaa waxaa dheer, shaqaalaynta shirkadda waxaa ku jira tiro aad u badan oo doorar ah kaydadka diyaarka ah ee xilliyeed sida wakiillada adeegga macmiilka, wakiillada tigidhada/albaabka, wakiillada adeegga xamuulka ee la tilmaamay. Shaqaalaysiinta farsamayaqaannada diyaaradaha iyo injineerada ayaa arkay kor u kac tan iyo Juun 2021. Shirkadda ayaa sidoo kale xoogga saareysa inay sare u qaaddo dakhliga xamuulka iyo saamiga suuqa ee Latinka iyo gobolka EMEA.